Kudya kweLaxative: mhanyisa ura hwako hwekufambisa zvakasununguka | Kudya kweNutri
Mapepa ane hutano
Anodzinga y kugwinya
Matipi ekudzikisa huremu
Kurema uremu zvigadzirwa
Michael Serrano | | Zvokudya, Nutrition
Kune zvakawanda zvekudyara marara muzvibereko nemuriwo chikamu chemuchitoro chako. Sezvo vanogona kuva inoshanda zvakanyanya mukudzivirira kana kurapa kupatira, pasina kupokana zvakakodzera kuti uzive zvavari.
Natural laxatives ivo vanozopa kukurudzira kune yako yemukati kutama uku vachikupa iwe zvakakosha mavitamini uye zvicherwa kune mamwe mabasa anoitika mumuviri wako.
1 Nei uchitora laxatives?
2 Infusions ine laxative mhedzisiro
3 Uri kuwana fiber yakakwana here?
4 Laxative chikafu chekudya kwako
5 Mararamiro ako ndiwo akakonzera kuzvimbirwa here?
Nei uchitora laxatives?
Mishonga yeLaxative inopa mhinduro inokurumidza uye inoshanda pakubatira. Nekudaro, hazvikurudzirwe kuti uzvishandise kazhinji nekuti muviri unogona kujaira kusafanira kuita ura wega. Muchidimbu, laxative mishonga inogona kuumba kuvimba.
Iyo imwe nzira ndeye laxative chikafu, icho chinobatsirawo ura hwekufamba kuenda nekukurumidza. Zviri nani kuti kubuda kwacho kuitike nenzira yakasikwa uye ine hutano nerubatsiro rwechikafu. Saka edza laxatives echisikigo kutanga.
Infusions ine laxative mhedzisiro
Tarisa uone chinyorwa: Laxative infusions. Kana iwe uchida zvinomera uye mishonga yechisikigo, ipapo iwe unowana izvo zvakawanda zvigadzirwa zvine laxative zvivakwa.
Uri kuwana fiber yakakwana here?
Kana uine dambudziko nekuzvimbirwa, uyu ndiwo mubvunzo wekutanga kuzvibvunza. Kudya kwefibre-hurombo ndezvimwe zvezvikonzero zvinonyanya kukonzera kupatira.
Huwandu hwezuva nezuva hwefibre ndeye magiramu makumi maviri neshanu, kunyange hazvo huwandu hungasiyana zvichienderana nehurume kana zera. Unyanzvi hwakanakisa hwekuwana zvakawanda kubheja pazviyo zvese uye izvo zvigadzirwa zvinoratidzira huwandu hwakawanda hwefibre pamazita avo. Nekudaro, iwe unogona kuwana fiber muzvizhinji zvekudya izvo zvinoberekwa kubva pasi. Izvi zvinotevera mimwe yepamusoro fiber miriwo. Rangarira kutora yako fiber kubva kune zvakawanda zvekudya sezvinobvira pane kuzvimisikidza iwe kune imwe chete:
Peya (ine ganda)
Mbatatisi (ine ganda)
Apple (ine ganda)
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mabhenefiti e fiber haaganhurwe kugaya. Inofungidzirwa izvo Ichi chinhu chinoitawo chakakosha kudzora shuga yeropa uye cholesterol mazinga., pamwe nekuderedza njodzi yekubatwa nezvirwere zvemwoyo.
Laxative chikafu chekudya kwako
Vamwe vanhu vanazvo kakawanda kupfuura vamwe, asi kazhinji, hapana munhu akachengeteka kubva kuumbiridzo. Nenzira iyi, pamwe watoedza zvimwe zvekudya zvinorapa:
Inoumbwa nemvura zhinji (kusatora H2O yakakwana kunogona kuita kuti kupatira kuve kwakanyanya), uyu muchero unowanzo kurudzirwa mumamiriro ekuzvimbirwa nekuda kwekureruka kwaro. Izvi zvinokonzerwa neayo sorbitol uye fiber zvemukati, zvinhu zvinogadzirisa matumbo ekufambisa. Kunyangwe iri nyowani, isina mvura kana iri muchimiro chejamu, plum haisi imwe yeanonyanya kuzivikanwa mishonga yekuzvimbirwa netsaona. Inoshanda kwazvo.
Kunyangwe ichinyatso kuonekera seyakasarudzika laxative, zvakakosha kuti uzive kuti plum inonziwo imwe inonakidza zvinhu. Kutsvagisa kunounza se antioxidant, antiseptic uye kugutsa michero (yakanaka pakurema kana ikadyiwa zvine mwero).
Muonde unonaka ndechimwe chikafu chine laxative athari. Chakavanzika chiri mukubatanidzwa kwe fiber uye magnesium inopa. Kunze kwekudzivirira uye kurwisa kupatirwa, maonde anopawo mukana wakanaka wesimba. Neiyi nzira, kuisanganisira iyo mukudya kwako inogona kuve iri zano rakanaka panguva dzekukura kukuru kwepanyama kana kwehungwaru. Ivo vanoonekwawo sevanonakidza kune vanhu vane yakakwira cholesterol kana yakakwira BP.
Iyo yakanaka yekuchengetedza yakanaka yemukati yekufambisa ndeye ita shuwa kuti iwe unogara uine laxative chikafu mune chako chikafu pane kuti ushandise kwazviri chete kana paine matambudziko.
Mararamiro ako ndiwo akakonzera kuzvimbirwa here?
Kudya Laxative kunonyanya kushanda kana kusanganiswa nemararamiro ane hutano. Shanduko dzinotevera dzinogona kukubatsira kuti ubude zvirinani, kunyangwe pasina chikonzero chekutora chero mhando ye laxative.
Kana iwe uri pasi pekushushikana kwakawanda, chikafu chinogona kufamba zvishoma nezvishoma kuburikidza neura hwako. Mune ino kesi, relaxation techniques ivo vachakubatsira iwe kugadzirisa dambudziko. Pane rimwe divi, Kushaikwa kwekuita zvemuviri zvakare kune zvakashata kukanganisa kumatumbu ekufambisa. Saka dzivisa kugara pasi uye kurovedza muviri nguva dzose kana usati watove. Kudzivirira kupatira ndicho chimwe chete chezvikonzero zvakawanda zvekutanga kudzidziswa.
Inofanira kuonekwa kuti zvimwe zvirwere zvinogona kukonzera kupatira, ndosaka ichiramba (ichigara kwemavhiki akati wandei) kana ichiuya ichiperekedzwa nezvimwe zviratidzo (kusanganisira kuonda), unofanirwa kuenda kuna chiremba kuti uongororwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Laxative chikafu